Nosy Koh Kood, Thailandy, Pattaya ~ Journey-Assist -Ny fahitana ny nosy. Ahoana no hahatongavana any
Pejy fandraisana » Pattaya » Таиланд » Asia » Eran-tany / Faritra » Nosy Koh Kood
Koh Kood Island, Koh Kut, Pattaya
16 Janoary, 2020
Fampijaliana ny nosy Koh Kood
Koh Kood no lehibe indrindra amin'ireo nosy akaikin'i Pattaya ary amin'ny fotoana mitovy amin'izany ihany no tena lavitra azy. Tsy lavitra an'i Ko Kuda ny sisintany Thai-Kambojiana. Ity nosy ity dia manankarena amin'ny flora sy ny biby, misy karazan-biby mampinono, bibikely ary bibikely isan-karazany. Tsara be ny morontsiraka eto, mazava ny rano fa indraindray kosa dia malefaka rehefa mandeha ny rano. Vitsy dia vitsy ny olona any amoron-dranomasin'i Koh Kuda, ka afaka miantehitra amin'ny fiainana manokana ianao na mandritra ny vanim-potoana fizahan-tany.
Ny lafiny iray ao amin'ity nosy ity dia azo antsoina hoe detachment sasany, eny fa na dia maty aza (ala tsy maty, sns). Na izany aza, amin'ny fotoana iray, dia miala sasatra ihany ny fitsaharana eto. Ao amin'ny torapasika eo an-toerana dia saika tsy eo ny olona, ​​tsy misy fihinanam-piainana mihitsy. Mandritra izany fotoana izany, ny trano fandraisam-bahiny dia manome ny haavon'ny haavo avo indrindra.
Toetoetran'ny Nosy Koh Kood
Koh Kood dia iray amin'ireo nosy lehibe indrindra any Thailand. Raha ny habeny dia tsy kely kokoa noho i Koh Chang. Ny halavan'ny Ko Kuda dia 22 km ary ny 10 km ny sakany.
Koh Kood dia tanora ary mandroso ara-dalàna ny trano fandrao Thai. Lavitra ny làlan'ny fizahan-tany no nisy azy, ka efa nanomboka namolavola azy io ny vahiny. Noho izany, misy toerana be virijina mitazona ny hatsarany faran'izay tsara ny zavamaniry tropikaly. Betsaka ny torapasika, saingy vitsy ny olona eo aminy. Madio sy tsara ny ranomasina eto.
Raha resaka vonjy rano voly any Koh Kood, lemaka ary tendrombohitra no mifanolo. Mandritra izany fotoana izany, ny ampahatelon'ny faritany dia tanànan'ny ala tropikaly. Ny haavon'ny tanàna avo indrindra dia ny tanàna Paenti. Mirefy 320 m ny haavony.Ny tany lemaka dia anjakan'ny rofia mavokely sy hazo karaoty, izay no fototry ny toekarena ho an'ny mponina eo an-toerana. Ny entana manan-danja hafa dia ny jono sy famarotana hazan-dranomasina, ary koa ny fizahan-tany manerana an'i Thailand. Tao amin'ny sehatry ny fizahantany no misy mponina 2 000 ao amin'ity nosy ity.
Fotodrafitrasa ao amin'ny nosy Koh Kood
Na izany aza, mbola tsy afaka hirehareha amin'ny foto-drafitrasa i Ko Kood. Saingy maro ireo mpizahatany no mahatsapa izany ho tombony, satria ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ao amin'ny nosy noho ny tsy fahampian'ny toeram-pivarotana sy club ary hotely be loatra. Ny mponin'i Ko Kuda dia tsy mahay miteny anglisy (afa-tsy ny mpiasan'ny hotely, mazava ho azy). Na izany aza, tsy hoe "maizim-bazaha" ity nosy ity, misy trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, bar, ary tsy dia misy fivarotana lehibe. Misy mihitsy aza ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana.
Ny iray amin'ireo vohitra lehibe indrindra ao Ko Kude dia Ao Yai. Akaikiny ny seranan-tsambo, izay misy sambo mpanjono.
Any amin'ny Hoalan'i Thailand no misy azy io, akaikin'ny morontsiraka atsinanan'ny Mainland Thailand, ary ao amin'ny faritany Trat. Ny halaviran'ny tanànan'i Trat (afovoan'ny faritany) hatrany Koh Kuda dia 79 km. Avy any Bangkok mankany ity nosy 320 km ity, ary avy any Pattaya ka Koh Kuda 230 km.
Sarintanin'ny Nosy Koh Kood
Torapasika any amin'ny nosy Koh Kood
Madio ny moron-tsiraka ao amin'ny nosy Koh Kood ary na dia ny fihinana azy aza. Fotodrafitrasa kely indrindra, sy ny fasika sy ny rano faran'izay madio - inona no mampiavaka ny torapasik'i Koh Kuda amin'ny moron-dranomasina ao Thailand
Renivohitra Khlong Yai Kee (Klong Yai Ki)
Renivohitra Khlong Yai Kee (atody Klong)
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/Kec4q1PYMpjnCf4HA
Khlong yai kee riandrano (Klong Yai Ki Falls)
Akaikin'ny morontsiraka dia misy riandrano miklong khlong yai kee mahafinaritra
Khlong yai kee riandrano. Randrano ao amin'ny nosy Koh Kood
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/K2biWBudgq8VeQHf7
Reniranon'i Khlong Mat (Klong Mat)
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/VWxjVtUHYsWkBwbX9
Ao Ta Pao Beach (Tapao)
Ao amin'ny Pantai Ao Ta Pao ao amin'ny Koh Kood Island
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/hDeneW7qzfx6rnV28
Klong Chao tora-pasika
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/PNjzjgJmNLfURLYr6
A Beach Lay (Ao Tum)
A-Na-Lay Beach eo amin'ny Koh Kood
Bang Bao Bay amin'ny Koh Kood
Ao Takhian Beach
Lalana Takhian eo amin'ny Koh Kood
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/KjQmBFu1ukCDjLPb9
Morontsiraka Khlong Hin
Reniranon'i Khlong Hin ao amin'ny Koh Kood
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/fjtkeSmG2fpagJwe7
Ao Jark Beach (Neverland)
Ao amin'ny torapasik'i Ao Jark (Neverland) ao amin'ny Koh Kood
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/fDjQZWu1mpmR5YTw7
Ao Prao Beach amin'ny Koh Kood
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/31wjtqxVLNLk1zYQ9
Ahoana ny lalana mankany amin'ny nosy Koh Kood
Tsy misy seranam-piaramanidina ao Ko Kuda. Noho izany antony izany, tsy afaka manidina mivantana eny amin'ny fiaramanidina ianao. Avy amin'ny firenena hafa, mila manidina aloha any amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra ianao Suvarnabhumi.
Aorian'izany dia mila tonga any amin'ny tanànan'ny Trat ianao. Ao amin'ny Trat dia afaka mandray taxi ianao, mankany amin'ny pier, izay mandeha any Koh Kood ary miverina.
Fomba 3 mankany amin'ny Trat avy any Suvarnabhumi:
Mifindra mivantana amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra ho an'ny fiaramanidina izay manidina amin'ny seranam-piara-manidina izay akaikin'ny Trat. Ny fiaramanidina toy izany dia manidina indroa na intelo isan'andro (miankina amin'ny vanim-potoana) ary fananan'ny Bangkok Airlines. Maharitra adiny iray eo ho eo ny sidina ary mitentina 3 baht.
Avy amin'ny Suvarnabhumi mankany Bangkok. Mandeha any amin'ny Trat miala avy any Avaratra sy Atsinanana (Ekkamai) fiara fitateram-bahoaka ao an-drenivohitr'i Thailand. Handeha eo amin'ny 5 ora ny dia ary handany 300 baht.
Afaka maka taxi fotsiny ianao Suvarnabhumi mankany Trat, fa lafo 4 eo ho eo ny baht.
Ferry mankany Koh Kood
Nisy sambo avy any amin'ny tanibe Thailand ka hatrany Koh Kood dia niala tao Laem Sok berth, izay akaikin'ny Trat. Mandeha milomano amin'ny karazan-tsambo hafa manerana ny Nosy izy, matetika an'i Ao Salad sy ao Ao Yai.
Ny vidin'ny tapakila Ferry 350-600 baht (an'ny frera samy hafa dia samy hafa ny vidiny).
Faharetan'ny dia mankany Koh Kood
Handeha eo amin'ny 2 ora eo ny dia.
Rehefa avy nijanona tao an-tsambo dia tsy mora loatra ny mankany amin'ny torapasik'i Koh Kuda. Indraindray misy tokona mandondona eo akaikin'ilay seranana, ary indraindray tsy misy na dia iray aza. Ny safidy azo itokisana indrindra dia ny famakiana hotely misy fifanarahana famindrana.
Avy amin'ny nosy Koh Chang ka hatramin'ny nosy Koh Kood amin'ny ferry
Ny sambo ho any Ko Kudu isan'andro dia mandeha any amin'ny nosy hafa koa - Koh Chang. Mba hahazoana ny Koh Chang ka Koh Kood, tsara indrindra dia mividy tapakila amin'ny iray amin'ireo masoivoho fitetezam-paritany izay misy ny biraony ao Koh Chang. Mandritra izany fotoana izany, ny vidiny dia saika mitovy amin'ny an'ny serivisy fitsangatsanganana samihafa
Ny vidin'ny hafainganam-pandeha sy ny vidin'ny sambo avy any amin'ny nosy Koh Chang mankany amin'ny nosy Koh Kood
Vidin'ny hafainganam-pandeha (boaty hafainganana) 900 baht,
Ferry - 700 baht.
Nandeha sambo tao Koh Chang avy tao Bang Bao Pier sy Kai Bay Beach.
Rehefa mividy tapakila dia afaka misafidy ny làlan'ny fialana ianao raha maniry; tsy miankina amin'izany koa ny vidin'ny tapakila. Mitsangatsangana fotsiny avy any Bang Bao i Ferry.
Ny fividianana tapakila amina masoivoho fitetezam-paritany dia misy ny fanomezana ny tuk-tuk maimaimpoana, izay hitondrany anao any amin'ny toerana fandehanana amin'ny sambo na sambo mivantana avy any amin'ny hotely.
Avy any Pattaya ka mankany KoKood Island
Avy any Pattaya ka hatrany Ko Kuda dia azo alalana amin'ny fampiasana ny serivisy kamio iray Vondrona Pattaya.
Momba ny minivan'ity orinasa ity dia afaka miainga avy any Pattaya mankany amin'ny seranana ianao, izay hiainga ny sambo mankany Koh Kood.
Ny saran-dàlana dia 500 baht.
Manakaiky ny birao dia mila mividy tapakilan'ny ferry ianao.
Weather on Koh Kood Androany + Forecast
Ny widget dia mampiseho ny toetrandro ankehitriny amin'ny Ko Kude. Afaka misafidy ny sosona tianao ianao (onja, rivotra, rahona ary maro hafa).
Hotely any Ko Kude